YUMI ZOUMA: INYANISO OKANYE IZIPHUMO ZOKUPHONONONGWA KWEALBHAMU - IINDABA
Inyaniso okanye Iziphumo
Iingoma ezigqwesileyo zebhendi yaseNew Zealand yile nto umntu anokuyibiza ngokuba yipicnic disco: uyonqena ngeyona ndlela intle, njengokuzolula phantsi kwelanga elitshisayo kunye nesiqhobosho segubu ngamaxesha athile ukuze akuvuse ngobunono.
Dlala iTrek Umkhondo olungileyo / umntu ongalunganga-Yumi ZoumaUkuhamba Ibhendi / Thenga
Abanye bathi intle ayisiyiyo yonke into, kodwa ngaba ayimnandi ngamanye amaxesha? Njengamasongo omtsalane, iikeyiki ezincinane, okanye iTimothée Chalamet — wonke umntu uyazithanda ezo zinto. Iqela laseNew Zealand u-Yumi Zouma bebesenza intle, iphupha lamaphupha ukusukela ngo-2014, kunye ne-albhamu yabo entsha kunye nokukhutshwa kwabo okokuqala kwiPolyvinyl, Inyaniso okanye Iziphumo , akunjalo. Igutyungelwe yi-gauzy synth kunye nokuhambelana kwezwi, umculo wabo unencasa emnandi njenge raspberry evuthiweyo. Kodwa kuko konke ukugqibelela kwezobuchwephesha, i-winsome aesthetics ingqina ukuba ayinakuncipha.
Amagqabantshintshi Inyaniso okanye Iziphumo yile nto umntu anokuyibiza ngokuba yipikniki disco: iingoma eziva zonqena kweyona ndlela intle, njengokuzolula phantsi kwelanga elitshisayo kunye nelinye kuphela ixesha lomjikelo wokukuvusa ngobunono. KwiNdlela eKhanyayo eKhanyayo / Indoda engalunganga, imvumi uChristie Simpson ucula ngathi uza kulala, ephupha ngokukhumbula ixesha apho sasopha ukuphuma kwelanga. USimpson ugqwesa kolu hlobo lokuhanjiswa okumnandi, okulala, okugcwala imigca yakhe ngentliziyo ebuhlungu. Xa ecula igama elibuhlungu ku Lie ngathi Uyandifuna Ndibuyele, liziva lilodwa kwaye lithe ngqo. Ndacinga nzulu ngayo, utsho ngobudlelwane obulahlekileyo, eguqula ingxelo ukuba ibe sisicelo esingxamisekileyo sokuba uthando lubuye.
U-Yumi Zouma ulunge kakhulu ekwakheni ezi meko zinamawundlu, ezidlulayo. Ndiyathemba ukuba uyakundibamba / undibhalele xa uphuma, uSimpson ucula phezu kwe-crystalline arpeggios yeMirror eMlilweni, ingoma eyabelana ngesandi sayo se-synth-pop kunye namaqela afana neAlvvays kunye ne1975. I-echoey synths kunye ne-billowy vocaly layering ye-Cool yeSibini zityebile kwaye zithambile njengebhotolo kwipani eshushu. Nditsho nesihloko esithi My Palms Ngaba Isalathiso Sakho Sokubamba Intliziyo Yakho sigcwele i-saccharine melodrama-ethe ngqo ngaphandle kokuchazwa, njengomyalezo onyanisekileyo onokuthi uwuthumele kumntu otyumkileyo emva kokucingisisa okuninzi kunye nokubhala kwakhona. Inyaniso okanye Iziphumo yeyona nto iphambili kulutsha lwengoma yokuthanda isandi sokudla: ukungazonwabisi ngokungakhathali kunye neemvakalelo, kutyalwe nzulu kwinyani, uthando, kunye nomzekeliso.
Kodwa ekugqibeleni, iimvakalelo ezicocekileyo zinxiba. Inokubakho kuphela into encinci ye-synth shimmering, umatshini wokukrola, kunye namazwi e-naptime ngaphambi kokuba yonke into iqale ukudibana. Umboniso bhanyabhanya obalaseleyo wokwenyani okanye umkhondo we-1975 awuchazwanga kukuzibophelela okungagungqiyo kuhlobo kunye nefom, kodwa ngumceli mngeni kuyo. Nokuba uvavanyo luza lufutshane, iimpazamo kunye neenzame ezisilelayo zisivumela ukuba sibabone abanye njengabantu abangcolileyo, abaluhlaza, nabanzima esizaziyo ukuba singabo. Inyaniso okanye Iziphumo ufana nekhadi loSuku lweValentine-luvuyo, ngamanye amaxesha luyanelisa, kwaye kulula ukulibala.
Thenga: Urhwebo olungalunganga
Ikhaya labantwana baka-kurt cobain
ujames brown kwindawo yehlathi
Olona khetho lulungileyo kwii-earbuds
umculo we-roxy ngolonwabo lwakho
Isigcina-ntloko esifileyo ehlabathini